Kuqor garaynta softiweer bilaash ah | Laga soo bilaabo Linux
farshaxan | | Aplicaciones
Waad isweydiisay inta jeer ee aad lumiso inta udhaxeysa eegida kumbuyuutarkaaga iyo fiirinta kumbuyuutarkaaga saacad. Haddii aad ku dhufato dhammaan saacadaha aad ku qaadato kumbuyuutarkaaga qorista warbixin ama dukumiinti kale, xitaa haddii aad waqti badan ku qaadato Facebook, Twitter, iwm. Wuu garan doonaa inay tahay waqti la tixgelin karo, waa wakhti dhiman, oo la khasaaray.
Haddii aadan rabin inaad waqtigaaga ku lumiso, makiinad garaynta ayaa naga caawinaysa, taas oo toban farood loo adeegsado in lagu qoro iyada oo aan la eegin kumbuyuutarka, kordhinta wax soo saarkeenna oo aan xoogga saareyno qorista halkii aan ka ahaan lahayn sida loo sameeyo.
Tan iyo wakhtigii aan u adeegsan jirnay inaan kumbuyuutarka ku qorno, barashada qorista waa muhiim. Waxaa lagula talinayaa dadka da 'kasta ha ahaadeene, iyo xitaa ka sii badanba, aad ayey muhiim u tahay in la saameeyo kuwa ugu yar si ay caruurnimadoodu u bartaan inay si sax ah u qoraan, iyagoo adeegsanaya farsamooyinka makiinada. Shabakadda waxaa jira barnaamijyo fara badan oo lagu barto qorista, waxaa jira bilaash iyo lacag bixin, bilaash iyo lahaansho, hoosta waxaan ku soo qori doonaa barnaamijyo naga caawin kara howsha barashada qorista.
Waxaa ka mid ah barnaamijyada garaacista weyn Klavaro, Ktouch; carruurta waxaan leenahay TuxType, barnaamijyadan waxaa lagu maamuli karaa labada GNU / Linux iyo Windows. Waxaan sidoo kale leenahay Mecanog oo ku shaqeynaya Windows, waxay u badan tahay inuu ku socdo GNU / Linux iyadoo la adeegsanayo Khamri.
Markan waxaan rakibi doonnaa Klavaro, laakiin waxaa kugu habboonaan lahayd inaad iskudaydo barnaamijyada kala duwan ee lagu sharraxay si aad u aragto midka ku habboon dookhaaga shaqsiyeed.
Sidoo kale waa suurtogal in la sameeyo rakibidda garaaf ahaan, iyadoo la adeegsanayo Synaptic; raadi barnaamijka aad rabto ka dibna dooro inaad ku rakibto, waa mid aad u fudud.
Daaqadda guud ee Klavaro
Klavaro waxay muujineysaa menu weyn oo leh 4 ikhtiyaar, waa lagama maarmaan haddii aad tahay neophyte makiinada wax qorida si aad u isticmaasho hordhaca naloo fidiyay.
Hordhac - koorsada qorista
Ka dib markaan akhrino hordhaca waxaan bilaabi karnaa inaan ku celcelino. Klavaro waxaa ka mid ah kalimaynta, haddii aan dooneyno in aan joojino, kaliya ka jooji xulashada Qeexista ee ku taal menu-ka weyn.
Bilowga koorsada aasaasiga ah waxaa suurtagal ah in la muujiyo dariishad ay ku tusayso farta ay tahay in loo isticmaalo xaraf kasta oo la qoro, sida ku cad animation-ka soo socda (RIIX MUUQAALKA CIYAARTA):
Adeegsiga Klavaro - Guji si aad u ciyaarto
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Muuqaaladda softiweer bilaash ah
Weyn, waxaan kaliya ka fekerayay inaan raadsado codsiyo sidan oo kale ah oo loogu talagalay Linux. Hadda waxaan isku dayaa.
Way ila soo daahday aniga inaan ku isticmaalo aaladdaas Linux. Waxaan ku bartay Macamatic-ka Windows, laakiin waxaa lagu qaddariyaa anigoo ku hadlaya magaca kuwa cusub ee doonaya inay ka bartaan khibradahan Tux ..
Ma aanan ogeyn calaamadaha ku yaal furayaasha f iyo j
Faa'iido badan ayey u leedahay dadkaas hadda bilaabaya inay ciyaaraan kiiboodh noloshooda.
Dhankeyga, waxaan bilaabay inaan wax ku qoro anigoo adeegsanaya makiinad duug ah (ilaa iyo hada way shaqeysaa) markii aanan xitaa laheyn daabacad, taasoo wax badan iga caawisay markii aan wax ku qoro kumbuyuutarka.
Waa maxay macluumaadka waxtarka leh, waxaan ka ogaa KDE oo xitaa ma isticmaalo KDE. KDE waa mid aad u fiican laakiin waa wax fiican, si lama filaan ah ayaad u dooneysaa inaad xitaa ka sii qurux badnaato. Ka dibna muhiim maahan.
Laakiin… miyuu qof dhab ahaantii fiiriyaa kumbuyuutarka markuu wax qoro!? WTF !!!
Anaga oo og in tilmaamyadu ay tagayaan F iyo J (HINT - HINT: taasna waxay u leedahay gargaarka, si aan isla markaaba u aqoonsanno iyadoon loo eegin kumbuyuutarka) isla markaana la waafajin karo faraha intiisa kale sida ay tahay, waa looma baahna in la eego kumbuyuutarka oo kaliya lagu qoro ereyada laakiin loogu talagalay qaansooyinka, xargaha, astaamaha, booska dambe, koofiyadaha, tab, wax kasta oo aad rabto.
Haddii saynisyahan kumbuyuutar uusan aqoon sida loo qoro isagoon eegin kumbuyuutarka, waa inuu raadsadaa hiwaayad / xirfad kale>: D
Hagaag, waxaan bartay sida loo qoro anigoo adeegsanaya makiinad qoris markii aanan xitaa bixin lacagta daabacaadda, runtuna waxay tahay inay iga caawisay inaan la qabsado markii wax la qorayo oo xitaa aanan wax dhibaato ah kala kulmin kumbuyuutarka; taas caksigeeda, waxaan ahay xabad markii ay timaado qorista.
Hagaag, sax maahan saynisyahano kumbuyuutar, laakiin waxaan ogahay inay wali jiraan saxafiyiin badan oo wax ku qoro 2 farood ... taasi waa, tilmaanta gacan kasta, oo fiiri kumbuyuutarka markaad wax qoraysid. : /
Makiinado iskuul hore. Isticmaalka 3 farood ama in ka badan ayaa kuugu filan inaad ku qori karto xawaare teeb ku habboon.
Weligay ma qaadan fasal qorista. Waxaan qoraa anigoo fiirinaya kumbuyuutarka, laakiin si dhakhso leh ayaan u qoraa.
Laakiin waligeed kama daahin inaad barato :), waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga.
Ku jawaab artus
ma waxaad tahay madax?
Iyo ka faa'iideysiga xaqiiqda ah inaan ka hadlayno qorista, mid ka mid ah mufasiriinta ama tifaftireyaashu ma sameyn karaan faallo ku saabsan wax ku oolnimada adeegsiga qaababka keyboard-ka ee aan ahayn QWERTY-da caadiga ah sida ku dhacda Dvorak?
Wixii aan ku soo arkay internetka, waxaan leeyahay aragti ah in dadka adeegsada Linux ay u badan tahay inay adeegsadaan qaabab kale oo kiiboodh ah, sidaa darteed waxaan ku dhiirranayaa halkan.
Hagaag, waxaan isticmaalayay Dvorak in cabbaar ah, runtuna waxay tahay in qoraalka, kaliya qorista, ay fiicantahay, waxaad isku dayeysaa dadaal yar waxaadna si dabiici ah u isticmaashaa farahaaga oo dhan. Si loo barnaamijyeeyo maahan wax raaxo leh (gaar ahaan haddii aad isticmaasho kiiboodhka Ingiriisiga), haddii ay sidaas tahay waxaa fiicnaan lahayd in la isticmaalo qaybinta 'Colemak', dhibaatadu waxay tahay in xusuusta muruqyada faraha aysan u baranin qeybinnada kale ... I dhaqso ayuu wax ugu qori jiray QWERTY (hehe, sidee la yaab leh tahay in eraygaas loogu qoro kumbuyuutarka Dvorak XD) laakiin hadda way igu adag tahay ...
Weli waan jeclahay Dvorak.
Wixii haraaga ah, kiiboodhka 'QWERTY' ayaa sifiican ugu qanacsan qorista (maaddaama inta badan aan u isticmaalo gacantayda bidix waxyaalaha badankood, kama aanan dhibsanin qodobkaas anigoo adeegsanaya qaab kale oo kiiboodh ah
Waxa kale oo jira kumbuyuutarro ergonomic QWERTY ah oo loogu talagalay barnaamijyada:
Magaca QWERTY wuxuu ka yimid qaabeynta furayaasha, fiiri kumbuyuutarkaaga oo ka bilaabmaya Q kuna eg Y.
Kumbuyuutarrada Microsoft ee ka soo baxa laantaas waxay noqdeen kuwa ugu raaxada badan ee aan ilaa hadda qabtay. Waxay yihiin kuwo si fudud cajiib ah.
Abuuraha kiiboodhka Dvorak, inuu naqshadeeyo, wuxuu sameeyay daraasad wuxuuna tirakoob ku go'aamiyey furayaasha aan inta badan riixno oo aan ku amro iyadoo la raacayo shuruudahan.
Kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Dvorak keyboard' ma uusan helin faafitaankii la filayay oo sida ugu badan loo isticmaalay waa QWERTY, waana sababtaas sababta ay u badan yihiin codsiyo iyo taageero loogu talagalay.
Waan ogahay in dad badani isticmaalaan waana wax aad u wanaagsan, muhiimadu waxay tahay in la isticmaalo qaab naga caawinaya inaan si dhakhso leh oo hufan wax u qoro.
Waxaan u maleynayaa in qof kastaa leeyahay qaab wax lagu qoro si dhakhso ah, midkoodna laba, saddex ama afar farood xD, laakiin barnaamijkaas waa mid aad u wanaagsan in si sax ah loo sameeyo 🙂
Aad baad ugu mahadsan tihiin caarada, hada waan tijaabinay
Waxaan adeegsaday makiinada wax qorista, waxaan isku dayay midkaan waana kuu sheegayaa, waad ku mahadsantahay ka qayb qaadashadaada.
Aad waxtar badan u leh dhammaystirka farsamadeenna, mahadsanid.
Qaado + 10 my http://i.imgur.com/wlZjCQz.png
Habka ugu fiican ee lagu barto qorista waa iyada oo la adeegsanayo makiinad wax lagu qoro, sababta oo ah furayaasha oo adkaada, in kasta oo ay tani ka caawinayso ka-hortagga daaqadaha.
Ku jawaab debianita7
Hagaag, waxaan bartay sida loo isticmaalo kumbuyuutarka QWERTY mahada qoraalka makiinada qoraalka. Khaladku waa dilaa.
Barnaamij kale oo cinwaankiisu yahay Esperanto. 🙂, software bilaash ah ayaa iyaga ka buuxa.
Eeg gtypist. Waxaan ku qoray maqaal isaga ku saabsan GUTL, laakiin hadda wuxuu khadka uga maqan yahay sababo la xiriira dayactirka http://gutl.jovenclub.cu/how-to-aprender-a-utilizar-correctamente-el-teclado/‎
Waxaan sidoo kale isku dayay gtypist, waa wax aad u fiican. Xidhiidhka aad bixiso lama heli karo.
Waxa kale oo jira ktouch, way fiicantahay inaan u isticmaalo sababtoo ah waxay taageertaa kiiboodhka faransiiska: 3.
Kiiboodhka AZERTY? Horey ayaan ulaqabsaday kumbuyuutarka Latin Amerika iyo Isbaanishka, laakiin kamay baran cajaladaha kumbuyuutarka iyo in yar oo Faransiis ah.
Kiiboodhka Ingiriisiga waa isku mid, kaliya la'aantiis ñ (had iyo jeer meesha semicolon).
Midka xiisaha lihi waa kiiboodhka dvorak.
Waxaan bartay qorista laba farood, barashada qorista ayaa i siisay caajisnimo. Waan ku qanacsanahay laba farood, aan aragno haddii tani ay sifiican ii fiicnaan doonto ...
Hubso inaad sifiican usameyn doonto, waad arki doontaa.
Kaliya waan diiwaangaliyay, Maqaallo aad ufiican, waxaa aad ugafiican inaad ka aqriso meesha asalka ah intii aan raaci lahaa Taringa!
Nasiib darrose, ma jirto hab deg deg ah oo loo adeegsado teebabka teknolojiyadda casriga ah ee taleefannada casriga ah ku jira oo waliba kaba sii daran, haddii ay ka yimaadeen Android.
Wixii KDE waxaa jira Ktouch. Waa qayb ka mid ah bay'adda shaqada sidaas darteed waxay ku jirtaa dhammaan qaybinta.
Laakiin qofkii runtii doonaya inuu barto sida ugu dhakhsaha badan ayaa laga yaabaa inuu rabo inuu ka fiirsado u beddelashada kiiboodhka Dvorak. Waxaa ikhtiraacay dhakhtar inuu awood u yeesho inuu si dhakhso leh wax u qoro oo uusan ku daalin; waxaana lagu beddelay Qwerty aan naqaano maxaa yeelay waxay ahayd mid aad u karti badan waxayna ka dhigtay xoghayayaasha inay aad ugu xirmaan hubka yar yar ee makiinadaha wax lagu qoro.
Maxaa intaa ka sii badan, halkan waa PDF-ga oo ah kiiboodhka Dvorak si aad u soo dejiso. Waxay ku daabacaan warqad dhejis ah, oo ay ku dhajiyaan kumbuyuutarradooda iyo voila… si ay u tababaraan:
Digniin: Kharash qurux badan Adeegso
Haa runtii, teebabka Dvorak waxay leeyihiin qaabab kafiican oo furayaasha ah, oo loogu talagalay isticmaalka badan ee aan ka yeelno. Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo pdf-kaaga.
Waxaan ku rakibay kumbuyuutarka qoyska, oo ay asal ahaan u isticmaali jireen waalidkeey, oo qiyaastii labo sano ka hor ay u beddeleen xp-ka lubuntu oo aysan ahayn wax cabasho ah oo ay qabaan dhinacooda (tan iga yar) mararka qaarkoodna ay adeegsadaan, waxay leeyihiin abuuray nooc tartan ah si loo arko cida ugu badan ee garaacaysa daqiiqadii xD
Waxaan nafteyda usheegay sanado badan sida ay muhiimka u tahay barashada makiinada qormada, waan soo dagsaday oo aan rakibay codsiyo aan tiro lahayn oo cidna iima caawin. Sababtoo ah iyagu waa aalad xun, waa wax fudud inaanan u adeegsan ... Aan aragno haddii aan xitaa nus saac ku qaato maalinkan midna waxaan joojiyaa qorista kaliya 3 farood, waan dheereeyaa, laakiin 10 faraha ...
Waad ku mahadsantahay dib u eegista 🙂
Ma aanan ogeyn inuu jiro barnaamij lagu barto qorista. 🙂
Waxaan isticmaalayay kiiboodhka Dvorak dhowr bilood hada, waxaan dareemayaa inaan si deg deg ah wax u qoro.
Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda waxay umuuqataa in saameyntu ay tahay mid nafsaani ah tan iyo markii kahoreysay oo leh
Kiiboodhka 'QWERTY' oo ku wajahan 28 ppm (ereyada daqiiqaddii) haddana waxaan sameeyaa 30 ppm. Waxaan ku arkay fiidiyowyo youtube halkaas oo dadku dhahaan ku qor 80-100 wpm. Hadday run tahay, qofkani si dhakhso leh ayuu u soomi doonaa maaddaama oo aan leeyahay 30 ppm waxaan durba u malaynayaa inaan dhakhso ahay haha. Qofna halkan ma sameyn karaa 80-100 wpm?
By the way markii aad akhrinaysid qoraalkan rakib klavaro-ka suse 12.3, sifiican ayey u shaqeysay ilaa iyo intii
dhagsii laakiin waxaa jira xoogaa khilaaf ah dhawaqa. Codka ku celcelinta ereyada wuu guul daraystaa wuxuuna keenaa calaamado qalad badan. Waad ku mahadsantahay boostada.
Waxaan horey ugu rakibay Debian 7 Wheezy oo leh LXDE oo si fiican ayey u shaqeysaa. Way fiicnaan doontaa aniga inaan barto qaabkeyga qasan ee qoraalka. Mahadsanid. Ka qayb qaadasho wanaagsan.
Tani way fiicnaan lahayd laba sano ka hor, in kasta oo aan ku bartay Mecamatic 🙁 Waxaan xoogaa ku tababbarayaa kuwan.
Jibriil dM dijo
Ku rakibay VoromvOS-kayga (oo ka soo jeeda Ubuntu 12.04 oo leh Consort sida desktop) iyada oo aan wax dhibaato ah ku qabin Synaptic (oo leh terminal waxay i siisay qalad).
Runtu waa taas
Jawab Gabriel dM
Ha ha ... Waxaan dhihi lahaa "mar hore ayaan aqaanay sida loo qoro" ... waxna waan taabtay waxayna dirtay fariinta ... 😀 😀 😀
Waxaan u rakibaa si carruurtaydu (gaar ahaan gabadhayda) ay uga qayb galaan inay wax bartaan. Waxaan cadeeynayaa in hadii ay bilaabanto maalmo yar gudahood aan haysto buugaag qoris ah oo ka dheer kuwa Ken Follet 😀
Aad ayaad u mahadsantahay waan isticmaali doonaa.
Haye, waxaan rabaa inaan ogaado barnaamijyada loo isticmaalo teeb garaynta. Eray ka sokow, haddii ay jiraan wax kale ????
Jawaab ku bixi Diana Gerardino
Makiinada kuqoran softiweer bilaash ah - http://www.typingstudy.com .
Aad waxtar ugu leh kuwa hadda bilaabaya inuu ciyaaro kumbuyuutar.
Had iyo jeer waxaan ku dhashay kumbuyuutar, laakiin aabahay wuxuu had iyo jeer carrabka ku adkeeyay inaan barto waxyaabo badan oo wax soo saar leh isla markaana aan ka tago waqtigayga firaaqada ah (inuu noqdo wiilka kaliya ee GNU / Linux guriga ku isticmaala taas awgeed). Qaabka aan wax u qoro wuxuu ahaa buug makiinad qoraal ah, laakiin taasi waxay ku soo hagaagtay markii ugu horreysay ee aad ka bilowdo Word ama OpenOffice.org (wakhtigaas?).
Hadda waxaan rabaa inaan u adeegsado tababar yar, tan iyo markii aan galay jaamacadda iyo waqtigayga firaaqada ah waxaan doonayaa inaan wax yar u huro si aan ula qabsado calaamadaha iyo calaamadaha.
Ku jawaab Comanshark